1 taona 2 volana lasa izay #1104 by alogie
Mahafinaritra ahy ny manidina fiaramanidina sy fiaramanidina kely sy fiaramanidina. Ny fiaviako amin'ny fiaramanidina ara-barotra dia tsy miasa tsara toy izany, ka mila fanazaran-tena aho.
Tiako ny fanangonam-bolo izay efa nampiana ahy:
ary ho an'ny toerana:
Open LC Europe, NA ary SA
Ny faritra Ekosy, Angletera ary NorCal avy ao amin'ny ORBX.
Manana hantsana efa tranainy aho izay miorina manodidina ny ivon-kadin'ny Core i5-2500k. Koa satria nividy izany aho, nanavao ny RAM ho 16GB, nametraka SSD ho an'ny OS sy SSD iray manokana ho an'ny lalao, ary nanampy ny karatra GT GTN 1050 Ti. Manao OK amin'ny alàlan'ny monitor 1680 x XMUMX taloha aho.
Ho an'ny tanjona kendrena dia manana ny TrackIR 5 aho ary ny HOTAS Cougar (tsy mamehy afa tsy ny vilany fantsakana ao amin'ny tavoahangy) sy ny pedal pedestal TMAS.